တူရကီပြည်နယ်မီးရထားMıntıkaအဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating လေလံရလဒ်၏6ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[21 / 09 / 2019] Bilecik အတွက်မီးရထားမတော်တဆ4နှစ်အကြာဖျော်ဖြေသတိပေးချက်များတဖန်လစ်လျူရှုခဲ့ကြ	11 Bilecik
[21 / 09 / 2019] Havaist တောင်တက်နာရီ Havaist စခန်းများနှင့် Havaist စျေးစီမံကိန်းများကို	34 အစ္စတန်ဘူလ်
Homeလေလံပွဲလေလံရလဒ်များကိုအဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating လေလံရလဒ်မှာတူရကီပြည်နယ်မီးရထားMıntıka၏6ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
04 / 09 / 2019 Levent Elmastaş လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ, အထွေထွေ 1
တင်ဒါရလဒ်လုပ်ခံရဖို့အဆင့်ကိုကူး၏ကျမ်းပိုဒ်ဇုန်အတွက် TCDD ဒေသ MUDURLUGU ရော်ဘာအပေါ်ယံပိုင်း
ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကမ်းလှမ်းမှုကို6မှ TCDD 2019 ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုMıntıkaနှုန်း 332783 ပတ်သက်. အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating စီးပွားရေးနူးညံ့ကုန်ကျထားတဲ့တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး 424.049,62 ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု (TCDD) 660.161,48 /6JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 26 TL, လေလံနှုန်းနူးညံ့လိုသလို 425.135,75 အားဖြင့်မရည်ရွယ်သောအကျိုးဆက်များပေးထားသောနှင့်အပြီးသတ်လိုက်ပါတယ် တည်ဆောက်နေ MAD ဗြာ။ MOT ။ Vehicle ။ ငှားရမ်းမှုပေ။ TURZ ။ SAN ။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ , LTD ။ STI ။ ဒါဟာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နုလေလံပါဝင်7ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါတင်ဒါ 8 အဆင့် Crossing အတွက်ရော်ဘာအပေါ်ယံပိုင်းအလုပ်အပိုင်းပိုင်းပါဝင်သည်။ ပေးပို့အလုပ် 90 (ကိုးဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှကြာချိန်။
ပိုမိုပေါ့ပါးUlukışlaလက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာအဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating လေလံရလဒ် 04 / 09 / 2019 တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး Adana6၏ပေါ့ပါးUlukışlaလက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာအဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating တင်ဒါရလဒ်။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2019 / 333876 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 373.442,62 TL နီးပါးကုမ္ပဏီတစ်ခုကကမ်းလှမ်းမှုကို 589.524,00 မှပေါ့ပါးUlukışlaစခန်းများလူငယ်များသို့အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating စီးပွားရေးနူးညံ့ပေးထားသောနှင့်လေလံကုမ္ပဏီကြီးဆောကျမှုရထားလမ်းတူးဖော်နှုန်းနု 30 ကြောင်းနိဂုံးချုပ်အားဖြင့်မဟုတ်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်ဖြစ်သော 373.551,10 TL, ကုန်ကျရယူလိုက်သည်။ နုလေလံပါဝင်4ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ နူးညံ့သော, 10 အရေအတွက်ရော်ဘာအပေါ်ယံပိုင်းအဆင့်ကိုဖြတ်မှာပြုသောအမှုအလုပ်ဖုံးလွှမ်း။ ပေးပို့အလုပ် 90 (ကိုးဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှကြာချိန်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဖျက်သိမ်း Protected အဆင့် Crossing ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေး (။ TCDD3လမ်းကို Maintenance ညွှန်ကြားမှုMıntıka USAK ၏ဒေသဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ကြားမှု) လေလံပွဲ 25 / 10 / 2013 TCDD Izmir3။ လေလံ AND SUBJECT ကို FOR Protected အဆင့် Crossing စောင့်ရှောက်စီးပွားရေးကိုနူးညံ့၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုအပိုဒ် 1- စီးပွားရေးပိုင်ရှင်ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေး 1.1 အရေးကြီး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေး; က) အမည်: TCDD Izmir3။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Atatürk Caddesi အဘယ်သူမျှမ: 121 / A 35220 Alsancak / IZMIR ဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်:0232 464 31 31 / 4269 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်:0232 464 77 98 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: xnumxbolgeihalekomisyonu@tcdd.gov .tr သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း / ခေါင်းစဉ်၏ f) အမည်နှင့်အမညျ: ME အဲလစ် Kom ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Office ကိုအထူးကု3။ လေလံ, နုအကြောင်းကိုအထက်ပါလိပ်စာနှင့်သတင်းအချက်အလက် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေး (။ TCDD3Balikesir Mıntıka၏လမ်းကို Maintenance ညွှန်ကြားမှု၏ဒေသဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ကြားမှု) Protected လေလံဖျက်သိမ်း 30 / 10 / 2013 TCDD Izmir3။ Protected အဆင့် Crossing စောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစျေးပြိုင်တင်ဒါနှင့်ပြဿနာများ RELATED ကိစ္စများအပိုဒ် 1- စီးပွားရေး၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပိုင်ရှင်ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေး 1.1 များအတွက်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေး; က) အမည်: TCDD Izmir3။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Atatürk Caddesi အဘယ်သူမျှမ: 121 / A 35220 Alsancak / IZMIR ဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်:0232 464 31 31 / 4269 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်:0232 464 77 98 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: xnumxbolgeihalekomisyonu@tcdd.gov .tr သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း / ခေါင်းစဉ်၏ f) အမည်နှင့်အမညျ: ME အဲလစ် Kom ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Office ကိုအထူးကု3။ လေလံ, နုကိုရည်မှတ်အထက်လိပ်စာသတင်းအချက်အလက် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရော်ဘာ Coating သူ Work အတွက်အဆင့် Crossing ရော်ဘာ 13 / 06 / 2014 အဆင့် Crossing ရော်ဘာရော်ဘာ Coating စီးပွားရေးအတွက် TCDD2။ တုရုမြို့အတွက်2စုစုပေါင်းအဆင့် Crossing (ရော်ဘာ) Coating စီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အတွက်Mıntıkaမှဒေသန္တရရုံးပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးxnumxbölgပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 10 4734 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 19 / 2014 61175-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Marsandiz အပန်းဖြေ 1 Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 06005 - 3123090515 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: hakanozt@gmail.co ငါ d) ကိုတင်ဒါစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည်: က) အရည်အသွေး၏နူးညံ့မှ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 3122111571-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အအဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating ခုနှစ်တွင် 14 / 06 / 2019 အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating TCDD ADANA6၌တည်၏။ ဒေသန္တရရုံးပေါ့ပါး - Ulukışlaလက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာအဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 276066 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Kurtulus ခရိုင် Ataturk ရိပ်သာလမ်း 01120 Seyhan SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224536914 - 3224575807 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgemudurlugu@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်း အင်တာနက်လိပ်စာများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: တစ်) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနုမှ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 6-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ် ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: စက်တင်ဘာလ51997 Çerkezköy(189 ကီလိုမီတာ) လြှပျစစျမီးမှ-Kapıkul
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဖျက်သိမ်း Protected အဆင့် Crossing ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေး (။ TCDD3လမ်းကို Maintenance ညွှန်ကြားမှုMıntıka USAK ၏ဒေသဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ကြားမှု) လေလံပွဲ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေး (။ TCDD3Balikesir Mıntıka၏လမ်းကို Maintenance ညွှန်ကြားမှု၏ဒေသဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ကြားမှု) Protected လေလံဖျက်သိမ်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရော်ဘာ Coating သူ Work အတွက်အဆင့် Crossing ရော်ဘာ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အအဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating ခုနှစ်တွင်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လမ်းမကြီးကို Maintenance ၏ USAK ညွှန်ကြားမှုများနှင့်သံသယMıntıkaန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးယောဘကိုအောင်အတွက် Protected အဆင့် Crossing ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အဆင့် Crossing 28 အရေအတွက် Operating Officer Repair
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လမ်းမကြီးကို Maintenance ၏BALIKESÝRညွှန်ကြားမှုများနှင့်သံသယMıntıkaန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးယောဘကိုအောင်အတွက် Protected အဆင့် Crossing ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အဆင့် Crossing 76 အရေအတွက် Operating Officer Repair
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (390) သြဂုတ်လ 2019 (506) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)